I-CZH 50W yedijithali ye-VHF / ye-UHF iTransmitter (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) bandwidth ye-30MHZ. -CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi unxibelelwano: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iimveliso » Umdlulisi weTV » I-Ditigal TV Transmitter » I-CZH 50W yedijithali ye-VHF / ye-UHF iTranster TV (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) bandwidth ye-30MHZ.
iimvelisoUmdlulisi weTVI-Ditigal TV Transmitter
I-CZH 50W yedijithali ye-VHF / ye-UHF iTranster TV (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) bandwidth ye-30MHZ.
iindidi:I-Ditigal TV Transmitter / iimveliso / Umdlulisi weTV
I-CZH518D-50W Ukudluliselwa kwedijithali yeTV yedijithali (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) Iimpawu: ● Yonke idrivet ye-TV eqinileyo yomgangatho wedijithali, bandwidth yi-30MHZ. ● Ukulungiswa okugqwethekileyo, ukutshintsha-tshintsha kabini kuyatshintsha ngokuzenzekelayo. ● Amandla aphezulu e-LDMOS yamandla aphezulu, amandla aphezulu okufumana ...
I-CZH 1000W / 1KW Idluliseli yeTV yedijithali (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) VHF / UHF bandwidth 30MHz
I-CZH 500W Umatshini weTV oDluliselayo (i-DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) VHF / UHF
I-CZH 200W Umatshini weTV oDluliselayo (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) VHF / UHF
I-CZH 100W Idilesi yeTV yedijithali (DVB-T / T2 / ATSC / ISDB-T) VHF / UHF bandwidth ye-30MHz
I-FUTV3627 5w yedijithali ye-MMD yeDijithali yokuSasaza i-analog kunye nokuhanjiswa kwedijithali